MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA LLEWELLIN SETTER - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Llewellin Setter
Lacey the Llewellin Setter oo jira 6 bilood— 'Lacey waa mid firfircoon oo had iyo jeer ku jira ugaarsi . Feejignaan dheeri ah ayey siisaa qorraxda , balanbaalis , iyo shimbiraha dadka ka badan ama eeyo kale . Lacey waa mid saaxiibtinimo badan dadka, gardaro la’aan haba yaraatee. Way ku fiican tahay carruurta, eeyaha yaryar , iyo bisadaha . Waxay raadisaa feejignaan markay caajiso, laakiin iyadu waa farxad lagu madadaaliyo. :) '
Dejiye Llewellin waa eey aad u deggan, deggan. Si saaxiibtinimo leh oo aad u fiican carruurta, waa mid edeb yar, jecel kalgacal kasta oo ay heli karto. Xamaasad iyo firfircooni banaanka, laakiin gudaha waxoogaa aan firfircooneyn. Milkiilayaasha khafiifka ah waxay ku noqon doontaa ula kac. Noqon kara adag tahay in guriga la dumiyo . Xeerarka , qaabdhismeed iyo tababarka waa inuu bilaabaa waqti hore si looga hortago horumarka caadooyinka xun . Noocani wuxuu u baahan yahay awood leh , deggan, laakiin adag, kalsooni leh oo milkiileyaal joogto ah, laakiin waa in aan si xun loola dhaqmin. Wuxuu ubaahanyahay qaab dhismeed badan wuxuuna ku raaxeeyaa la ciyaarida eeyaha kale. Dejiyeyaasha Llewellin waa ilaaliyayaal ku filan. Waxay jecel yihiin inay dhex mushaaxaan oo waa qodayaal iyo boodayaal wanaagsan. Milkiilayaashu waa inay ahaadaan adag, laakiin deggan , kalsooni iyo iswaafajin . Ku habboon bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine waa lagama maarmaan.
Dhererka: 20 - 26 inji (50 - 66 cm)
Miisaanka: Ragga 45 - 65 rodol (20 - 30 kg) Dumarka 35 - 50 rodol (15 - 22 kg)
Laguguma talin inaad ku noolaato guryaha oo waxaad ku fiican tahay ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Xuduuda pomeranian collie mix puppy
Dhamaan dejiyeyaashu waxay u baahan yihiin maalinle dheer, socod socod ama waxay noqon doonaan kuwo aan xasilloonayn oo ay adag tahay in la maareeyo. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan inay si xor ah u ordaan iyagoo ku badbaadaya daarad deyr leh. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha.
Shanleynta joogtada ah iyo cadayashada jilicsan, fidsan, jaakad dherer dhexdhexaad ah ayaa ah waxa loo baahan yahay si loogu hayo xaalad heer sare ah. Waxaa muhiim ah in la hubiyo burrs iyo tangles, iyo in la siiyo taxaddar dheeri ah marka eygu daadiyo. Maydho ama shaambo qallalan oo keliya markii loo baahdo. Timaha jarjar cagaha hoostiisa oo ciddiyo ku dheji. Noocani waa celcelis daadiya.
xaqiiqooyinka eyga weyn ee swiss
Dejiye Llewellin waa la soo saaray Ingiriisi Dejiye sadarro uu sameeyay breed Ingiriis ah oo la yiraahdo Llewellin. Ereyga 'dejiye' wuxuu ka yimaadaa sida eydu u muuqdaan inay ku dhow yihiin inay fadhiistaan ​​markay ciyaarta ogaadaan. Hibooyinka Llewellin Setter waxaa ka mid ah ugaadhsiga, daba galka, dib u soo celinta, tilmaamida, ilaalada iyo kacdoonka.
Lacey the Llewellin Setter at 1 1/2 sano jir— 'Lacey weli waa isla cunugii macaanaa ee ay ahayd markay yarayd. Diiradeeda koowaad waxay socotaa oo ceyrsaneysa dabaqadaha, shimbiraha, iyo cayayaanka. Waxay si wanaagsan ula dhaqantaa dadka iyo eeyaha laakiin way ka labalabeyn kartaa inay la kulanto dad cusub mararka qaarkood. Iyadu waa eey weyn oo qoys waxayna si wanaagsan ula shaqeysaa bisadaha deggan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ahay milkiilaha quruxle Llewellin Setter !! '
Lacey Dejiyeha Llewellin ee 1 1/2 sano jir
Annie the Llewellin Setter — Sawir waxaa iska leh milkiilayaasha Mark iyo Bonnie Sherbourne
Eeg tusaalooyin badan oo ah Dejiyeha Llewellin
Llewellin Dejiye Sawirro
eeyo goberian ah oo indho buluug ah leh
badh pitbull badh american bulldog
shaqaalaha maraakiibta maraykanka iyo iskudhafka sheybaarka
Ey eyda eyda azores ee iibka ah
2 sano jir retriever